'Balichi qormaata guddaa ture, garuu irra aanne' H/G/O Daandi qilleensaa Itoophiyaa Tewelde Gabramaariyaam - BBC News Afaan Oromoo
Obbo Tawolde Gabramaariyaam hogganaa olaanaa Daandii Xiyyaaraa Itoophiyaa ta'uun waggoota dheraaf hojjetaniiru.
Daandilee Xiyyaaraa Afrikaa keessaa isa guddichaafi milkaa'aa akka ta'e kan himamu Daandiin Xiyyaaraa Itoophiyaa balaa torbee lama dura isa mudateen booda dubbii ijoo miidiyaa addunyaa ta'ee jira.
Balaa ET302 lubbuu namoota 157 galaafate kana namoota jalqaba dhagahan keessaa tokko kan ta'an Obbo Tawoldeen hanga yoonaa naasuun akka isaan hin gadhiifne dubbatu.
"Balaan sun mudachuu kanan dhagahe ganama ture. Dhugaa dubbachuuf akka maleen rifadhen ture, Baay'ee baay'een gaddes" jechuun miira ganama sanaa yaadatu.
Oduu balaa sanaa akkuma dhagaa'aniin ture gara bakka xiyyaarichi itti kufeetti kan qajeelan.
"Xiyyaarichi oyiruu qonnaa irratti kufe, qaamni xiyyaarichaa guutummaatti lafa jala lixee ture. Karaa gadi seene aarri xiqqoon ni mul'ata ture malee waanti xiyyaara fakkaatu achii hin mul'atu ture" jedhu.
Gadda sababa balaa kanaan itti dhagaahame irraa hanga yoonaa akka hin dandamanne dubbatu.
"Namoota waliin hojjennu, namoota beeknu dhabne. Gaggeessaa gootaaf malu taasifneef, sababni isaas hojii Daandii Xiyyaarichaa osoo hojjetanii du'an. Gootota keenya. Ammayyuu gadda keessa hin baane" jedhu.
Hojiin Daandii Xiyyaarichaa durumaa wal xaxaafi ulfaataadha kan jedhan Obbo Tawoldeen, balaan kun caalaatti akka isaan ko'oommachiise dubbatu.
Gadda guddaa keessa kan jiru hoggansifi hojjetaan dhaabbatichaa hojii idileen alatti maatii namoota miidhamani keessumsiisuufi jajjabeessuu qaba ture jedhan.
"Gama biraan ammoo hojiin qorannoo balaa sanaa jira. Kana hunda osoo hojiin idilee hin gufatiin, maamiltoonni keenya tajaajila barbaadan akka argatan gochuufi xiyyaarris sagantaa duraatiin akka balali'an gochuun mataan isaa hojii guddaadha."
Balaa mudateen rifaatuufi gadda guddaa keessa kan galaan hojjettoota dhaabbaticha dubbisanii jajjabesuufi dhiyeenyatti deeggaruunis hojii biraa akka ture himu Obbo Tawoldeen.
Balaa sanaan duuba dhaabbatichi qormaata guddaa keessa ture, haa ta'u malee qormaaticha milkaa'inaan irra aannee jirra jedhu.
Guyyaa balaan sun mudate sana qofaa Daandiin Xiyyaaraa Itoophiyaa balaliinsa 300 ol taasisuu isaas himaniiru.
Dhiibbaan balaa kanaa hagami?
Balaan Xiyyaaraa Itoophiyaa mudate kun damee balaliinsaa irraan dhiibbaa guddaa geesisuu tarkaanfiiwwan bala sana booda guutuu addunyaatti fudhataman ragaadha.
Xiyyaarri 'Boeing 737 Max' xiyyaaraa haaraa ta'uun isaa, Daandiin Xiyaaraa Itoophiyaas xiyyaaricha erga bitee hojii ittiin eegalee reefu baati afur ta'uun isaa balaa kana adda akka taasisu dubbatu.
Baatilee muraasa dura bifuma kanaan balaan xiyyaara Indoonezhiyaa wal fakkaataa irra gahe addunyaan dhimmichaaf gurra akka kennitu taasise jedhu.
Daandiin Xiyyaaraa Itophiyaa gosti xiyyaaraa 'Boeing 737 Max' hojii akka dhaabu murteessee guyyaadhuma wal fakkaataa xiyyaarota gosa akkasii 97 kan qabdu Chaayinaan tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuun ishee dhiibbaan isaa guddaa ta'uu mul'isa jedhu.
Guutuu addunyaatti xiyyaaronni 'Boeing 737 Max' 380 ta'an akka dhaabbatan taasifamuun murtee guddaadha jedhu.
Seenaa balaliinsaa addunyaa keessattu xiyyaarri tokko akka dhaabatu taasifamee qorannoon yoo gaggeeffamu xiyyaara Konkoorditti aanee kun isa lammataati jedhu.
Xiyyaaricha irrati gaaffi hedduutu ka'aa jira kan jedhan Obbo Tawoldeen bu'aa qorannichaa obsaan eeguun barbaachisaa ta'uu dubbatu.
Leenjii Paayileetotaafi gabaasaalee mormisiisoo...
Balaa kanaan wal qabatee leenjii meeshaa xiyyaricha fakkeeffamee hojjetame 'Simulator' jedhamuun kennamu fudhachuu dhabuun paayileetichaa akka sababa balaa kanaatti miidiyaalee tokko tokkoon gabaafamee ture.
Kuni 'Soba bu'uura hin qabnedha' jedhu Obbo Tawoldeen.
Leenjii ilaalchisee paayileettota daandii xiyyaaraa Itoophiyaa adunyaa irratti filatamoo fi akka dinqisiifataman kan isaan godhu karaa adda taheen yeroo dheeraan fudhatamee leenjii baay'een waan isaaniif kennamuufi.
Leenjii fi shaakalichi kan biyyota kaanii yoo caale malee kan hin xiqqaanne tahuu kan dubbatan Obbo Teweldeen ''namootni fi dhaabileen gabaasa kana baasan adunyaa biraa qabaachuu malu'' jedhan.
Dabalataan hoj-maata Daandii Qilleensaa isaanii kannen biroo waliin wal bira qabanii yommuu ibsan '' daandii qilleensaa adunyaa keenyaa biroo keessatti gargaaaraan paayileettii tokko xiyyaarichuma irratti sa'aatii muraasa yoo balaliisise paayileetii guutuu ykn olaanaa tahuu danda'a.
Daandiin Qilleensaa Itoophiyaa garuu hoj-maata kana hin eeyyamu.
'Hanga ammaatti qaama namaa guutuu ta'e hin arganne'
Akka Daandii Qilleensa Itoophiyaatti kaffaltiin leenjii hammam olka'aa yoo tahe iyyuu paayileetonni haaraan gidduugala leenjii balaliisummaadhaa waggaa lamaaf erga leenji'anii bahanii booda xiiyyaarota garaagaraa irratti gargaaraa paayileetii tahuun sa'aatii isaan irraa eegamu erga guuttatanii booda ammas gargaaraa paayileetii ykn balaliisisaa tahuun gara xiyyaarota 787 ykn 777tti akka guddatan taasisa jedhan.
Kan Awurooppaa ykn Ameerikaa waliin wal bira qabanii yoo ibsan paatileettotni Itoophiyaa hojii isaaniitiin bakka deeman hundatti kan jajamanii fi filatamanidha jedhan.
Gabaasa leenjii Simuleshinii ykn fakkeessa balalii ilaachisee ''gabaasicha nama beekumsa ayiveeshinii homaa hin qabnetu baase'' jedhan.
Leenjiin Simuleeshinii yeroo dhiyoo kan dhufe tahuu kan himan Obbo Teweldeen Daandiin Qilleensaa Itoophiyaatu yeroo jalqabaaf gara Afrikaatti fide jedhan.
Haa tahu malee paayiletiin tokko fakkeessa balalii xiyyaara 737 Max ykn 737 NG yoo leenji'e garaagarummaa hin qabu. Paayiletotni lamaanis tahe kaanis xiyyaara 737 NG irratti fudhataniiru jedhan.
Kanaafuu sababoota jiran yommuu ibsan '' Simuleeshinii ykn fakkeessa balalii 737 Max amma arganne'' jedhanii dabalataan ammoo kan 737 NG waliin garaagarummaa hin qabu jedhan. Balaan dhaqqabes kana waliin wal fakkeeffame malee rakkoo gama leenjiin uumame miti jedhan.
Obbo Tawaldee G/Maariyaam: ''Hanga ammaatti qaama namaa guutuu ta'e hin arganne''
Itoophiyaan namticha Ameerikaatti namoota lama ajjeesuun shakkame to'atte
'Maaraatoonii Landan olaantummaan xumurra'
Adamoo fi ayyaana Faasikaa maaltu walitti fida?
Shamarree Musliimaa warra Islaamumma morman duratti suuraa kaate
Sadiyoo Maanee fi Poogbaan taphattoota cicimoo bara kanaa [PFA] keessa galan
Monokseewwan Masirii luba ajjeesan irratti murtoon du'aa darbe
Kooriyaan Kaabaa barataa Ameerikaa 'doolaara miiliyoona 2 gaafatte'